Maxaad ugu mahad celineysaa NeogeCgrafos sida Google - Geofumadas
Maxaad u mahadsantihiin Neogeographers sida Google
Juunyo, 2009 ArcGIS-ESRI, Geospatial - GIS, GvSIG, Microstation-Bentley
Tani waa magaca wareysiga in Eric Van Rees uu la qaaday ragga muhiimka ah ee saddexda shirkadood ee ugu wanaagsan tiknoolajiyada juqraafiyada:
Jack Dangermond, Madaxweynaha ESRI
Richard Zambuni, Agaasimaha Geospatial Bentley
Ton de Vries, Fulinta ee Bentley ee kuyaala Cadastre iyo horumarinta dhulka
Halsey Wise, Madaxweynaha iyo Agaasimaha Guud Intergraph
Dukumeentigu waa mid xiiso leh, wuxuuna yimaadaa wakhtigii horumarinta tiknoolajiyada casriga ah (Gaaska GIS) uu si aad ah u kordhay webka (GIS web) iyo isdhexgalka ay la leedahay CAD-du waxay keentay wax badan. Marka laga reebo korniinka iyo isugeynta heerarka isdhexgalka iyo isdhexgalka shabakadda.
Wareysigu wuxuu ku salaysan yahay su'aalo taxane ah, oo mid kasta oo ka mid ah ka qaybgalayaashu ay kor u qaadayaan aragtida shirkaddaada ka horaysa isbedelka suuqa. Kuwani waa su'aalaha, aan loo turjumi karin macno ahaan:
Maxay noqon doonaan doorka mustaqbalka takhasuska leh ee GIS? Ma waxay yeelan doonaan xirfado badan oo kombuyuutar ah mise waxay sii wadi doonaan inay tixgeliyaan khubarada GIS? Ama waxaa laga yaabaa inaan u baahanno khubaro takhasus leh oo haysta farsamooyin badan oo farsamo, dhaqaale, sayniska iyo cilmiga sharciga ah ee lagu codsanayo geoinformation?
Miyaad u maleyneysaa in qalabyada GIS-ku-salaysan ay sii wadi doonaan ama lagu beddeli doonaa kuwa ku saleysan server-ka?
Shirkaddaadu ma leedahay masuuliyad dhibka caalamiga ah? Tani ma waxaa ku jira fursado lagu codsado GIS? Iyo sidee?
Wadamada Yurub, warshadaha GIS waxay ku saleysan yihiin INSPIRE, GMEIS, SIX iyo GALILEO waqtigan. Waddanka Maraykanku kani kuma xiiso galayo, waxaan heystaa aragti ah in warshadda halkan ay ku saleysan tahay waxa ka mid ah waxa Google, Microsoft iyo Yahoo ay sameeyaan iyo sida loola xiriirinayo iyaga. Maxaad u maleyneysaa?
Isku-dhafka CAD-ga ee GIS waa awooda maalin kasta ka muhiimsan. Maxay tahay xalka hadda ee shirkaddaada hadda ay tahay in ay gaarto isdhexgalka GIS-CAD? Sidee ayaad u aragtaa mustaqbalka: miyaynu sii wadaynaa inaan aragno labadaas khibradahan ama ma u maleyneysaa in wakhtigu uu iman doono marka labadaba la qabsashada guud?
Haddii aad rabto inaad aragto, waa inaad kala tasho daabacaadda bisha Juun ee majaladda Geoinformatics, oo si gaar ah u soo saarta waxyaabaha xiisaha leh sida:
Xogta Sonar ee xeebta
Khariidadda isticmaalka dhulka ee Australia
Kaalinta aduunka adoo adeegsanaya barnaamijka GIS. Tani waa sii wadida sii wadida ay ka keeneen saddex qeybood oo hore ku saabsan qalabyada GIS ee furan. Maqaalkani waa mid xiiso badan, oo ku saleysan buugga Gary E. Sherman, oo leh magacaas, eeg garaafka iyo jagada ay ku siiyaan gvSIG heerka qaaska ah ee isticmaalaha.
AutoDesk, ka badbaadinta magaalooyinka ka badan
AutoDesk Bentley Systems ESRI GvSIG OS majallado
Post Previous«Previous Wii, sida ugu fiican ee safarkayga
Post Next Software GIS - lagu sharxay erayada 1000Next »